Imikhonyovu ye-inthanethi ethandwa kakhulu 🥇 Emulator.online 🥇 🥇
Ngokuthuthuka kwezobuchwepheshe, izidingo zethu nazo ziya ngokuya zisetshenziswa ekusetshenzisweni kobuchwepheshe uqobo, kusuka ekuxhumaneni nomphakathi kuya ekuxhumaneni nabantu, ekuthengeni online kwezinto ezilula kakhulu zempilo yansuku zonke. Akusizi ngalutho-ke ukukhomba ukuthi nabakwa-scammers sebephucule amasu abo okuthola abasebenzisi abampofu ezandleni zabo. Eqinisweni, imikhonyovu eku-inthanethi isizakala ngozwela, ukwesaba nokuhaha kwabasebenzisi be- Internet.
Kulesi sihloko sizohlaziya imikhonyovu esabalele futhi esetshenzisiwe emhlabeni we-inthanethi.
FUNDA NONKE: Ungawugwema kanjani umkhonyovu wogaxekile nowe-SMS
1. Izithembiso ezinehaba:
izisulu ziyengelwa ngemishwana esebenzayo efana ne "umsebenzi ophelele ngokuchofoza nje kude. Sikusiza ukuthi ukuthole"NOMA"Sebenza ekhaya bese uhola imali ephindwe kayishumi!".
Enye yezinto ezaziwa kakhulu, manje iyaqhubeka Facebook iminyaka ethile, ngumkhonyovu we Ukuvinjwa kukaRay Qedela ngomfanekiso onenani lentengo yalo: akunangqondo ukuthi lo mkhonyovu wenze futhi uyaqhubeka nokwenza izisulu eziningi, ezikhangwe intengo yama-euro angu-19,99, zithambekele ekuchofozeni isithombe. Kulezi zikhathi, isisulu siholelwa ekukholweni ukuthi ngokunikeza isamba semali noma izincwadi zabo zasebhange, bazokwazi ukuthola umsebenzi ophelele ngaphandle kokuzikhandla noma umkhiqizo ngentengo enesaphulelo, vele, engeke ize ifike.
2. Izinsizakalo zokuqoqwa kwezikweletu:
Kulokhu, isisulu sicabanga ukuthi ngokukhokha isamba semali esilingana nephesenti lezinto ezikweletwayo, iqembu labantu lizozinakekela mathupha zonke izikweletu. Akukho okungaba ngamanga kakhulu, ngoba isisulu asisoze sabona izikweletu zakhe ziyaneliseka, kepha, kunalokho, sizozithola sisenkingeni enkulu kakhulu.
3. Sebenza ekhaya:
Amanethiwekhi awahlali efihla umkhonyovu, kepha akuvamile ukuthi abantu abanikela ngomsebenzi ekhaya bangathembeki ngendlela ababonakala ngayo.
4. "Kuzame mahhala":
... futhi mahhala ke akunjalo. Umshini usungula ukuthi abakhwabanisi bathembisa ukusebenzisa insizakalo noma isikhashana, mahhala ngokuphelele, lapho-ke inkinga kuzoba yinto engenakwenzeka ukuba isihloko sizikhiphe ohlwini lohlelo ababhalise kulo, bephoqeleka ukuthi bakhokhele okuthile. ngakho-ke ayinayo inzalo.
5. "Udinga imali mboleko?":
Lo ngumkhonyovu wakudala lapho abantu abaningi, ezikhathini eziningi sebevele benezikweletu, baqhubeka nokuwa ngokungenakuphikwa. Empeleni, igama elithi "imali mboleko" isetshenziswe ngokungeyikho njengesichazamazwi se- "inzalo"Eqinisweni, kwenzeka kaningi ukuthi labo abalandela lezi zinhlinzeko bacele imali yokuvula imikhuba bese inyamalala emoyeni omncane. Uma kunesidingo semalimboleko nokuxhaswa ngemali, kuhlala kunconywa ukuxhumana nezikhungo zamabhange ezaziwayo.
6. Ukwebiwa kwemininingwane yakho:
Ngeshwa kulula kakhulu ukusebenzisa umkhonyovu futhi kusabalele kakhulu esikhathini sokuxhumana nomphakathi. Ubulula bokubamba ubunikazi babanye sebuvele bukhona, kepha okubi kakhulu ukuthi ezimweni eziningi isisulu siyabona sekwephuze kakhulu. Ngalo mqondo, ukukhwabanisa kwezikweletu okwenziwe, empeleni, kuyanda ukweba umazisi- Umkhonyovu ubandakanya ukweba idatha yomuntu siqu neyezezimali bese uyisebenzisa ukufaka isicelo semalimboleko noma ukuthenga izinto online; konke kulimaza izisulu ezingase zazi ngomkhonyovu kuphela lapho, ngokwesibonelo, zizama ukufaka isicelo semalimboleko kepha zenqatshelwe ngokungazikhokhi izimali ezenziwe ngabakhwabanisi. Ngakho-ke, kubalulekile ukubika iqiniso kuziphathimandla bese uqhubeka nesicelo sokwenqaba ukusebenza.
7. "Uzuze ama- € 10.000!" noma "I-iPhone YAMAHHALA 10 eyenzelwe wena uma uchofoza lapha!":
Ngubani ongakaze abone izigelekeqe ezifanayo ngenkathi ephequlula iwebhu? Kufanele ukhumbule ukuthi ungalokothi uchofoze kulokhu okunikezwayo, ngoba ezimweni ezinhle kakhulu uzothola igciwane kuyilapho, okubi kakhulu, othile angahlola i-PC yakho ukude, ebe lonke ulwazi oludingekayo ukufinyelela, ngokwesibonelo, ama-akhawunti akho asebhange. .
FUNDA NONKE: Okufanele ukwenze uma i-Intanethi ithi "Halala, uphumelele"; ungayigwema kanjani noma uyivimbe
8. Shayela ku-800 ***** uthole ukuthi ubani oyithandayo oyimfihlo ":
... futhi impela hhayi abalandeli; Lapho ushayela lezi zinombolo, empeleni, imali yokuxhuma iyodwa ingabiza kakhulu futhi izinsizakalo ezingacelwanga nazo zingakhokhisa imali engalingani.
9. Ukuthengisa kuwebhu:
kulokhu kuhlale kukuhle ukwethemba amasayithi asemthethweni ed ogunyaziwe thenga uthengise kuwebhu. Eqinisweni, uma uphawu lwaziwa kakhulu futhi lwaziwa, kuba lula ukuhlangana neziza ezeba uphawu nemininingwane yalowo mkhiqizo, bese uletha imikhiqizo enamaphutha kwabanebhadi abasemsebenzini noma umkhiqizo othengiwe awukho. ayikaze ihanjiswe kumamukeli. Lapho ungena, iwebhusayithi ingahle ibonakale njengeyangempela, kepha iqiniso lokuthi ukuthengiswa okuningi kunesaphulelo esingu-50% kufanele kuzwakale ucingo lokuvusa umkhonyovu ongaba khona.
FUNDA NONKE: Ungayithenga kanjani ku-eBay yokugwema imikhonyovu
10. Ukukhwabanisa Nge-imeyili Yebhizinisi ne-CEO Inkohliso:
ezinye zezinhlobo ezintsha zomkhonyovu ezithinta ikakhulukazi izinkampani, lapho izigebengu zingena khona ekuxhumaneni kwazo nezinye izinkampani, noma lezo zabaphathi benkampani efanayo futhi, ezinemiyalezo engeyona kodwa ezibhekwa njengezithembekile yizisulu , phambukisa imali enkulu ukubheka ama-akhawunti egameni labakhwabanisi.
FUNDA NONKE: Bona ama-imeyili omgunyathi, awomgunyathi futhi angewona awangempela
kuvela kubumbano phakathi kwemiqondo ye- "izwi" mi "Inkohliso yomazisi" futhi ngumkhonyovu ohlose ukuhlanganisa ulwazi lwedatha yomuntu siqu yabasebenzisi nokusetshenziswa kwezingcingo ukubakhohlisa.
Isaziso sifika kumakhalekhukhwini noma ebhokisini leposi lezisulu, ngokusobala ezivela esikhungweni sabo sesikweletu, sibika ukuthengiselana okusolisayo okuhlobene ne-akhawunti yabo: umsebenzisi othintekile ngokuchofoza isixwayiso ekhelini le-Intanethi lesiza esenziwe Leli phuzu lithola ucingo, olwenziwe ngenombolo yamahhala engamanga, lapho abakhohlisi bezenza sengathi bangabasebenzi basebhange abafuna ukumisa ukweba ngenkathi, lapho amakhodi okufinyelela etholakele, bagunyaza ukudluliselwa noma ukukhokha ngemuva kwesisulu.
12. Ukukhwabanisa kwebhonasi yokuhamba:
la Ministry of the Environment usola ukuthi imibiko eminingana isanda kufika kanjani, ivela kulabo abahlose ukusebenzisa ngokunenzuzo ibhonasi yokuhamba mayelana nokuba khona kwezicelo ezahlukahlukene ezihlose ukukhohlisa abasebenzisi ngamagama abambekayo njenge "Ivawusha yokuhamba yango-2020". Umnyango udlulisa ukuthi izinqubo zokucela ibhonasi zidingidwa kanjani ngemigudu esemthethweni ezinsukwini ezimbalwa ngaphambi kosuku lokuthumela izicelo. Izicelo ezikhohlisayo sezivele zibikwe ngokushesha kuziphathimandla ezinekhono.
I-Rhlengware luhlobo lomkhonyovu lapho kubaduni bafaka khona i-malware kwikhompyutha noma isistimu yekhompyutha evimbela ukufinyelela kwesisulu kumafayili abo ngokufuna ukukhokhelwa isihlengo, imvamisa esesimweni se-bitcoin, ukusikhansela. Izicupho ze-fakehlengware nazo zingaba yingozi kakhulu: ubugebengu obunamacala amabi kakhulu bulimaza umuzwa wokuvikeleka nobumfihlo besisulu, futhi ngokuhlukile okwesabekayo, abaduni bathi nge-imeyili ukuthi bagqekeze ikhamera web ngenkathi isisulu sibheke i-movie. izithombe zocansi.
Isikhangiso se-cam-hacking, esisekelwa ukuphindwaphindwa kwephasiwedi yomsebenzisi ku-imeyili, siyindlela yokukhohlisa: kungaba usithumela ama-bitcoins noma ividiyo siyithumela kubo bonke oxhumana nabo. Empeleni, lokhu kuwukukhohlisa okumsulwa - abakwa-scammers abanawo amafayela evidiyo futhi abakaze bangene kwimininingwane yakho, njengoba iphasiwedi abathi banayo yaqoqwa nje kulwazi olutholakala esidlangalaleni lwamaphasiwedi nama-imeyili avuzayo.
Ngaphezu kokuhlala uqaphile, ochwepheshe bancoma okulandelayo:
ngaphambi kokufaka imininingwane yekhadi lakho lesikweletu kusayithi, udinga ukuliqinisekisa ukuphepha;
Mayo bathumele amakhodi abo okufinyelela ku-akhawunti yokuhlola - amabhange, empeleni, ngokwesibonelo, awalokothi acele imininingwane yokungena ebhange ekhaya nge-imeyili noma ngocingo;
unayo ukuqaphela lapho kuthunyelwa amakhophi emibhalo;
Ungalandi Mayo okunamathiselwe okufika nge-imeyili noma ngomlayezo wombhalo uma ungaqinisekiIdentity kusuka kumthumeli;
nganoma yiluphi uhlobo lokungabaza noma inkinga xhumana njalo iziphathimandla ezinekhono.
Kulokhu futhi sengeza ithuba lokusebenzisa uhlelo lwe-Anti-Rhlengware olwa negciwane leRhleng noma i-Crypto
FUNDA NONKE: Amawebhusayithi akhohlisayo anemikhonyovu eku-inthanethi